क्षयरोगबाट हात्ती जोगाउनै मुस्किल – Click Khabar
२०७७, २९ श्रावण बिहीबार0
चितवनः सन २००२ यता क्षयरोगका कारण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका १५ हात्ती मरीसकेका छन् । यस अबधिमा अन्य कारण सहित २५ हात्ती मरेको तथ्याङ्गक छ ।
चितवनका हात्तीमा पहिलो पटक सन २००२ मा क्षयरोग देखिएको थियो । यो संक्रमण सन २०१६ सम्म जारीनै रह्यो । त्यतिवेला निकुञ्जको पशु चिकित्सकको रुपमा कार्यरत डा. कमल गैरेका अनुसार क्षयरोगका कारण हात्तीमा समस्या देखिन थालेपछि नीजि र सरकारी सबै हात्तीको क्षयरोगको परिक्षण गरिएको थियो ।
त्यतिवेला निकुञ्जका १७, नीजि ४१ र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका २ हात्तीमा क्षयरोग देखिएको थियो । त्यस पछिका केही वर्ष संक्रमण नदेखिए पनि सन २०१८ यता क्षयरोगका कारण चार हात्ती मरेको अनुमान छ । निकुञ्जका बरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. बिजय श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो पटक यही साउन १९ गते मरेको दिपेन्द्रगजमा क्षयरोगको संक्रमण थियो । यस अघि मरेका तीन वटा हात्तीको पोष्टमाटमका क्रममा फोक्सोमा समस्या देखिएकाले ती हात्तीमा पनि क्षयरोगको संक्रमण भएको अनुमान गरिएको उहाँको भनाई छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ६० हात्ती रहेका छन् भने यहाँका नीजि होटलमा ५७ वटा हात्ती रहेका छन् । देशभर यो संख्या २ सय रहेको बताईन्छ । दुई सय हाराहारीनै जंङ्गली हात्ती रहेका छन् । श्रेष्ठ हात्तीमा दोस्रो चरणमा क्षयरोग देखा परेको अनुमान गर्नुहुन्छ । खतरा वढे पछि नीजि र सरकारी सबै हात्तीहरुको नमुना संकलन गरि क्षयरोग परिक्षण गरिदैं छ । उहाँले भन्नुभयो “पानी रोकिए लगत्तै एक दुई दिनमानै परिक्षण सुरु गछौं ।”
रगत र हात्तीको सुँढबाट निस्किएको ¥याल संकलन गरेर परिक्षण गरिने उहाँले बताउनुभयो । समयमानै उपचार गर्न सकेमा हात्ती बचाउन सकिने भन्दै उहाँले उपचारको कामलाई तिब्रता दिन लागिएको बताउनुभयो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ वरालले क्षयरोग परिक्षणको काम तत्काल सुरु गर्न लागिएको बताउनुभयो । क्षयरोग देखिएमा उपचार गरेर हात्तीलाई निको पार्न सकीने भएकाले सबै हात्तीको परिक्षण गरिने उहाँको भनाई छ ।
निकुञ्जका हात्ती बिभिन्न पोष्टहरुमा सुरक्षाका लागि राखिएका छन् भने नीजि हात्ती पर्यटक वोक्नका लागि होटलहरुले प्रयोग गर्दै आएका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हात्ती सफारीका लागि अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रख्यात छ । यहाँ सामुदायीक वनमा नीजि हात्तीमा पर्यटकलाई घुमाउने गरिन्छ । हात्ती चढेर दुर्लभ वन्यजन्तु हेर्न पर्यटक रुचाउँछन् । हात्तीमा क्षयरोग देखिएमा उपचार गर्न लामो समय लाग्ने गर्दछ । यो खर्चिलो पनि हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
क्लिक खबर विशेषमुल खबरराजनीतिस्वास्थ्य
महामन्त्रीको स्वास्थ्य अबस्था स्थिर
२०७७, ३१ भाद्र बुधबार0
लकडाउन खुल्यो बोलबम मेला खुलेन
२०७७, ११ श्रावण आईतवार0
रत्ननगर अस्पताललाई आइसोलेशन बनाईने
२०७७, १ भाद्र सोमबार0
क्लिक खबर विशेषप्रदेशमुल खबरसमाज
बिस्तार गर्दै अस्किना केवल
क्लिक खबर विशेषप्रदेशमुल खबरस्वास्थ्य
होम आईसोलेसनमा बस्ने वढे